Naya Post Nepal | काठमाडौँ महानगर : बालेनले कटाए २६ सय मत, विपक्ष लाई भारी मतले पछि पर्दै हेर्नुस् कसको कति ?
काठमाडौँ महानगर : बालेनले कटाए २६ सय मत, विपक्ष लाई भारी मतले पछि पर्दै हेर्नुस् कसको कति ?
काठमाडाैँ । महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको अग्रता का’यमै छ । अहिले सम्मकाे अपडेटअनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साहले २ हजार ६०१ मत प्राप्त गरेका छन् ।
नेकपा (एमाले)का केशव स्थापित भने ११ सय ८६ मतले पछा डि छन् । उनले १ हजार ४१५ मत पाएका छन् । उता नेपाली कांग्रेसका सिर्जना सिंहले १ हजार ३५९ मत प्राप्त गरेकी छन् । उक्त मतहरू वडा नं ३२, १, २, ३ र ४ को गणनाबाट प्राप्त भएका हुन् ।
यी वडाकाे गणना चरणमा रहेको र छिट्टै विजेता घोषणा गरिने निर्वाचन अधिकृतकाे कार्यालयले जनाएको छ । कामपा वडा नं ३१ को पनि गणना शुरु गरिएको छ ।
यसैगरी उपप्रमुखमा एमालेकी सुनिता डङ्गोल फराकिलाे मतले अगाडि छन् । डंगोलले यो समाचार तयार पार्दासम्म २ हजार म त ल्याइसकेकी छन् । डंगोलका अन्य प्रतिस्पर्धी रामेश्वर श्रेष्ठ र विनिता मगैयाले क्रमशः ५८० र ५१३ मत लिएका छन् ।
मतगणनामा ढिलाइ कारण आलोचना हुन थालेपछि निर्वाचन कार्यालयले गणना केन्द्र थप गरेको छ । कार्यालयले एक केन्द्र थप गरी विभिन्न छ स्थानबाट मतगणना गर्न थालेको छ ।
यो पनि ,,सत्ता गठबन्धनले जारी मतगणनाको प्रारम्भिक न तिजा`अनुसार ८ पालिकामा जीत हासिल गरेको छ । जसमा एक नगरपालि`का समेटिएको छ भने बाँकी सबै गाउँ`पालि का हुन् । नतिजा आएका हिमाली जिल्लाका अधिकांश पालि कामध्ये काँग्रेसले ५ पालिकामा जित हासिल गर्दा माओवादी केन्द्रले एक र एकीकृत समाज`वादी पार्टीले ३ पालिका जि तेको छ ।
यस्तै माओवादी ६० को हाराहा`रीका पालिकामा अग्रस्थानमा हुँदा जसपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका दल`ह रुले पनि केही सिटमा अग्रता राखे`का छन् । हाल`सम्म १४ स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक हुँदा दलहरुले जितेका पालि का यसप्रकार छन् :
एकीकृत समाजवादीबाट काइके र छार्का ताङसोङ गाउँपा लिकाबाट अंगद कुमार राना र सेनाङ गुरुङले विजय हासिल गरेका छन् ।
–चामे गाउँ`पालिकामा लोकेन्द्र बहादुर घले, सेफोक्सुण्डो गा उँ`पालिकामा धावा धावा गुरुङ विजयी भएका छन् । डिस्या ङ गाउँपालिकामा कान्छा घले तथा लो–घेकर दामोदर`कुण्ड गा उँ`पालिकामा लोप्साङ छोम्पेल विष्ट विजयी भएका छन् ।
२०७९ जेष्ठ १, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 431 Views